Duqa Muqdisho oo ka hadlay weerar xalay ka dhacay Muqdisho – XAMAR POST
Duqa Muqdisho oo ka hadlay weerar xalay ka dhacay Muqdisho
Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa uga mahadceliyey shacabka Caasimadda, gaar ahaan Degmada Warta-Nabadda sida ay gacanta uga geysanayaan sugidda ammaanka Caasimadda.
Guddoomiyaha ayaa xusay in xalay fiidkii ay Booliisku gacanta ku soo dhigeen shakhsi bam gacmeed tuuray, kadib markii ay shacabka degmadu gacan ku siiyeen Ciidamadda ammaanka.
“Waxaan u mahadcelinayaa Shacabka Degmada Warta-Nabadda oo xalay fiidkii Booliiska farta ugu fiiqay shakhsi argagixiso ah oo bam gacmeed tuuray, kadibna gurigii uu galay looga dabategey ciidankuna ay gacanta ku soo dhigeen. Argagaxisadu ha ogaato in bulshadu go’aansatay meel in looga soo wadajeesto danbiile walba ”
Duqa Muqdisho ayaa ku ammaanay bulshada ku nool Gobolka Banaadir sida ay had iyo jeer uga digtoon yihiin kuwa geysta falalka amnidarro, waxuna ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan kaalintooda ku aaddan sugidda amniga.
owladda oo sheegtay in Qaraxyo iyo xubno ka mid ah Shabaab la qabtay